Arch na-akwụsị iji /etc/rc.conf iji hazie usoro | Site na Linux
Arch na-akwụsị iji /etc/rc.conf iji hazie usoro ahụ
Alf | | Nkesa, Noticias
Dika abughi m onye oru nkesa a, amaghi m ma tinyegodi mgbanwe a ma obu ma odi n 'odinihu, mana ka anyi lee ihe ha chere.
N'oge gara aga na nkà ihe ọmụma nke usoro ochichi na Archlinux ọ sie otu otu faịlụ nhazi zuru ezu: the / wdg / rc.conf. Faịlụ a nwere ozi nhazi niile maka sistemụ iji rụọ ọrụ, edezie ya:
Elekere sistemụ (Mpaghara ma ọ bụ UTC, mpaghara ga - emebi n'oge na-adịghị anya)
Mkpụrụ akwụkwọ keyboard, font njikwa, njikwa agwa njikwa
Mpaghara (asụsụ, mpaghara) nke ejiri ahazi sistemụ ahụ
Ngwunye kernel ndị ejiri aka rụọ
Ojiji nke teknụzụ nchekwa dịka RAID, sistemụ faịlụ BTRFS, LVM
Nhazi aha nnabata
Nhazi nke (mpaghara mpaghara ma ọ bụ DHCP)
DAEMONS ma ọ bụ usoro daemons iji kwado
Ọfọn, ihe niile ahụ agaghị adịkwa otu ahụ ọzọ. Nnukwu mgbanwe na-abịa Archlinux bụ ịkwụsị iji faịlụ a etinyere ma hazie mpaghara dị iche iche nke sistemụ ahụ na faịlụ na ndekọ aha dị iche iche. Gịnịkwa kpatara nke a? Azịza ya bụ maka systemd bootloader ọzọ ka ederedeSistemụ, ma e wezụga iji dochie njikwa buut, na-enyekwa aka ịhazi usoro ahụ n'onwe ya, na-eme ka ọ dị mfe ịhazi usoro ahụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe ọzọ.
Nhazi ahụ ga - abụ:
Nhazi nhazi ohuru
Ọnọdụ ochie na /etc/rc.conf
Aha nnabata / wdg / aha nnabata / wdg / ụsụụ ndị agha Nkọwa
Akara njikwa na map keyboard / wdg / vconsole.conf AKOCKỌ
Ntọala mpaghara /etc/locale.conf /etc/locale.gen AKOCKỌ
Mpaghara oge / wdg / oge mpaghara / wdg / oge mpaghara AKOCKỌ
Hardware Elekere / wdg / oge adj AKOCKỌ
Kernel modul /etc/modules-load.d/ Ihe omume
Daemọn / wdg / rc.conf DEMONS
Ihu ọma / wdg / rc.conf na-anọgide dị ka njikwa DEMONS ọ dịghị ihe ọzọ ga-anọchi akụkụ ndị ọzọ niile site na faịlụ nhazi ndị a.
Ihe edeturu na asusu mbu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Arch na-akwụsị iji /etc/rc.conf iji hazie usoro ahụ
Arch J.Randall dijo
Dika Arch na-aghọwanye isi, anyị ga-eme ka ihe dị mgbagwoju anya maka ndị ọrụ.
Zaghachi Arch elite
Ee, ee, nke ahụ kpatara ya. ¬¬
Ezigbo ozi maka ndị anyị na-amalite iji Archlinux. O juru m anya mgbe m ga-edezi /etc/rc.conf na mpaghara ndị ahụ m ga-edezi na ntuziaka nwụnye m anọghị, ekwesịrị m ịlele wiki ma mee ya ọzọ.
Chei, ugbu a idezi faịlị 9 iji mee ihe emere na otu. M ga-atụ uche m hụrụ n'anya rc.conf. 🙁
Agbanyeghi na m aghaghi ileghara ya anya n'ihi na anwabeghi m ohuru ohuru a ma ugbua m rc.conf ka di ka odi. 😀
Mụta ịgụ, nzuzu, nke ahụ bụ faịlụ 10.
Site na omume na agụmakwụkwọ ahụ, ị ​​bụ onye na-emekọrịta saịtị abụọ na nwa akwụkwọ nke GE? Sc kposara.
Ọ na-agwa onwe ya okwu na anaghị m achọpụta obi ọjọọ ...
Haha nke ahụ dị mma, m na-eme onwe m ihe ọchị. 😀
Ọ ga-akara m mma ka ọ dịrị naanị otu, mana ọ bụrụ na ọ kwesịrị ịbụ ... ọ bụ ezie, ọ dị m ka ọ bụ ihe iju anya ... Ọ bụrụ na rc.conf ga-ebu daemons naanị, gịnị kpatara ị ga-eji kpọọ ya daemons.conf ma ọ bụ ihe yiri ya? Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnọgide na-akpọ rc.conf ma ọ bụrụ na ị hazie naanị otu ihe ...
Iji zere igbanwe usoro ndị na-akpọ rc.conf.
Emela ihe iwe, ma m kpọrọ asị detuo-mado isiokwu na á »bá» more naaná »‹ kará »‹ a mgbe ha na-agaghá »‹ na-enwe njikọ na isiokwu dá »‹ na agbanyeghị detuo-mado Enweghi ikike ma obu njikọta, mana opekata mpe, sọpụrụ onye kwesiri ya: http://www.rafaelrojas.net/2012/07/27/adios-al-etcrc-conf/
Gịnị bụ nsogbu ahụ, anaghị m aghọta? Ebumnuche abughi ikwado edemede ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, n'ezie, ọ bụrụ na Rafael Rojas na-eche na "Copy / Paste" nke ọ na-agwa anyị na oge a anyị gbanwere mbipụta ma ọ bụ wepu isiokwu ahụ. Ọzọkwa, ọ dị m ka ọ dị n’isiokwu ahụ enwere njikọ (nke bụ nke Alf doro anya hụrụ) na nke a, nwere njikọ ọzọ na saịtị ahụ ị kwuru ..
Ọ bụrụ na Rafael Rojas na-enwe mmetụta n'ụzọ ọ bụla kpasuru iwe, iwe, ma ọ bụ nwee ụdị nghọtahie ọ bụla, biko mee ka anyị mara na anyị ga-ewere usoro kwesịrị ekwesị.
Rafael Rojas dijo
Mba, anaghị m emejọ 😀
Njikọ post nke ị na-agbanye na-eme ka njikọta na blọọgụ m.
Ọ bụrụ na ị na-enweta ozi ozugbo na blọọgụ m, enweghị nsogbu, enwere njikọ maka blọọgụ ahụ, ọ bụghị iwu, mana ọ bụ omume ọma.
Zaghachi Rafael Rojas
Enweela m faịlụ ndị ahụ ahazi. Mana m enweghi ike ikpebi ihichapụ ochie rc.conf. Dika ihe omuma ndi ozo di na nzuko a mepere uzo di nma n’isiokwu a.
Otu ihe a anaghị amasị m, otu ihe kachasị amasị m banyere Arch bụ na, na otu faịlụ m ahazi ihe niile ma ọ bụ ihe niile ... enweghị ụzọ, enweghị m mmasị mgbanwe a.
Mana ọ bụghị ajụjụ nke Arch, mana dị ka isiokwu ahụ na-ekwu, nke systemd. Anyị amatakwala na Arch nwere mmasị ịrụ ọrụ dịka etinyere sọftụwia izizi.
Mana nke ahụ anaghị eme ka ihe sie ike na esemokwu na KISS nke arụsị? xD
Ọ dị mma ụbọchị ole na ole gara aga, arụnyere m Arch Linux na VB yana iso ọhụrụ na-eso ntuziaka nke aha m @gespadas na nke a gaara adị m mma 🙂
Ezi Ama 😉
Ama a na-efu ebe ahụ iji mezue nkuzi ahụ, ị ​​kwesịrị, @gespadas na ntuziaka gị, jikọta ya na edemede a ka ọ bụrụ ntuziaka ka o kwere mee. 🙂
Amaara m na usoro a bụ ihe a na-apụghị izere ezere n'ihi na ọ dị mkpa maka mmejuputa usoro ahụ, mana ọ na-ewe iwe dị ilu n'ọnụ m n'ihi na ọ tụfuru ọtụtụ amamihe Arch mgbe ọ na-ahazi ya, site na faịlụ ya etiti /etc/rc.conf. O doro anya na Arch abụghị naanị /etc/rc.conf/ ma faịlụ a bụ akụkụ dị mkpa nke àgwà ya ...
Bye bye /etc/rc.conf, anyị ga-atụ uche gị!
Mana dị ka akụkọ dị na peeji gọọmentị: http://www.archlinux.org/news/changes-to-rcconf-and-crypttab/
"A ka na-akwado usoro ochie ahụ, ya mere faịlụ nhazi ochie ga-arụ ọrụ na-agbanweghi agbanwe."
ya mere n’oge ahụ echeghị m na ọ na-ewute m nke ukwuu.
E nyere ihe edetu a na opekata mpe ebe 3, yabụ anyị ga-ebo onye ọ bụla ebubo, m na-echekwa nzaghachi Rafael, ọ bụrụ na ọ sị na a ga-agbanwe usoro ahụ ma ọ bụ ọdịnaya n'ihi na ejirila eriri ma ọ bụ ehichapụ ya na ọ bụ ya, na njikọ m tinye a na-ezo aka na blog nke Rafael.
Ihe ọzọ, enwere m ikike nke ndị ọzọ iji kesaa ozi sitere na blọọgụ ha, yana dịka ha gwara m, "Achọghị m ịma ịnwe kredit, ihe dị m mkpa bụ na a gbasaa ihe ọmụma"
Amen ………… enwere ndị na-ekwo ekwo maka ọdịnaya ha
Ikekwe ihe na-enye ndị mmadụ nsogbu bụ na isiokwu n'onwe ya bụ nnomi-akwụkwọ. Ọtụtụ isiokwu e mere na DesdeLinux nwere “copypasted” m, ọkachasị ndị nke Steam, ee ee, ha na-etinye isi mmalite ha mana ha na ndi m na ede. Ọ bụghị ihe na-ewe m iwe ma ọ bụ na-achụpụ m na igbe m, mana ọbụlagodi enwere m omume nke itinye isi mmalite ahụ na mmalite nke post, yana m kwuru na na njedebe, naanị iji dokwuo anya na post n'onwe ya abụghị nke m . Yabụ, m na-agbakwunye ihe ọ bụla na ntinye m na-eme.
Ehm, ọ bụ naanị ihe dị mma archlinux hapụrụ, ugbu a ọ bụrụ na ọ bụ 100% unyi, na naanị otu nke ka bụ BSD ịke na ederede ya, bụ naanị otu ma bụrụ nke e wellomiri nke ọma, Gentoo!
Zaghachi ka synflag
Ya mere, Arch dị mma naanị maka faịlụ nhazi? Nke ahụ abụghị Arch!, Lee anya na Wiki ya iji hụ ihe ọ bụ. Ma site na ụzọ, ọ bụghị naanị Gentoo nwere mmalite BSD, enwere distro kacha ochie nke bụ Slackware.
Puff. Site na nke a, ha gbagidere m nnukwu, aga m akwadebe ịkwaga fedora ma ọ bụ ubuntu, ọ bụ ihe nwute na Arch gbanwere otu n'ime isi okwu ya kachasị mma.
Ọ bụrụ na ị tinyela Arch, gịnị kpatara ịgbanwe? Ọ bụ ihe na-anaghị emetụta gị ọ bụla belụsọ ma ị gbanyeghachi. Site n'ụzọ, nke ahụ agaghị emerụ sistemụ arụmọrụ, adịla oke xD
O juru gị anya na nhọrọ gị bụ Fedora na Ubuntu, nwere ebumnuche dị iche iche karịa Arch. O doro anya na Arch abụghị ihe ị na-achọ.
M na-ede, n'ezie chakra oru ngo ga-a otu ezu n'oge na-adịghị na m ga-ruo ụbọchị 😀 na chakra forums ọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere systemd na nnukwu uru ọ ga-eweta. Anaghị m echegbu onwe m na ezigbo blog banyere linux ga-ewepụta ezigbo ndu ma ọ bụrụ na ijighị n’aka arch wiki.
Mgbanwe ahụ gaa sistemụ bụ ihe achọrọ iji pụta, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-abụ ndabere nke kernel ebe sistem na udev jikọtara, etinyela m sistem na faịlụ m naanị naanị mmelite na ọsọ buut kwesịrị mgbanwe ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe ihe niile ị ga-eme mgbanwe maka mgbanwe ndị dị mkpa maka ya. Mgbasa ndị ọzọ anaghị agbanwe agbanwe n'ihi na ha na-eji nwayọ nwayọ. Echere m na nke ahụ bụ isi ihe na-adịghị mma nke Arch, na-enwe mgbe niile ịmara banyere mgbanwe ọhụrụ na usoro. Mwepụta Mpụ !! ndị enyi…
Kpọmkwem, ihe maka ụfọdụ adịghị mma maka ndị ọzọ ọ bụghị, ụfọdụ na-enwe mmetụta karịa njikwa, ndị ọzọ nwere ike iche na ọ bụ ihe siri ike.
Icheta dịka ọmụmaatụ KZKG ^ Gaara (dịka enwere ike ịnwe ọtụtụ ikpe), ụta ahụ dara na enweghị ụzọ idozi mmebi ahụ, na igwe ọrụ ị gaghị enwe ike iwepụta oge iji chọọ azịza ya.
Anaghị m ekwu na ụta adịghị mma, ihe m na-ekwu bụ na onye ọ bụla nwere echiche nke ya.
Igbe: isiokwu akara ngosi ọhụrụ maka Lubuntu
Windows 8 ga-apụ na Ọktọba